Horudhac: Tottenham Hotspur vs Man United… (Jose Mourinho oo rikoor wanaagsan ka heysta Red Devils, sidoo kalena doonaya inuu mid cusub u dhigo) – Gool FM
(London) 11 Abril 2021. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa galabta garoonkeeda kusoo dhoweyneysa dhiggeeda Manchester United kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Spurs ayaa is araggii hore kulankan waxay kusoo adkaatay 6-1 iyadoo marti ku ahayd garoonka Old Trafford oo ay Red Devils ku ciyaarto.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 06:30 Fiidnimo xilliga geeska Afrika.
Tottenham ayaa dib usoo dhoweyneysa difaacyadeeda kala ah Toby Alderweireld iyo Serge Aurier, kuwaasoo toddobaadkii hore aanan ciyaari kaddib markii ay seegeen tijaabadii baarista Korona Fayras.
Hase ahaatee, difaacyada dadabka ka ciyaara ee Ben Davies iyo Matt Doherty ayaa dhaawacyo ku seegaya kulankan.
Dhanka kale, tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa rajeynaya in daafaciisa Luke Shaw uu taam u noqdo ciyaartan, inkastoo dhaawac loogaga saaray ciyaartii habeenka Khamiista ee ay Granada kula soo ciyaareen Spain lugtii hore ee wareegga siddeed-dhammaadka tartanka UEFA Europa League.
Marcus Rashford ayaa kusii ciyaari doona dhaawac yar oo anqawga ah, balse waxaa inta ka dhimman xilli ciyaareedkan garoommada ka maqnaan doona Anthony Martial.
Tottenham ayaa raadineya inay labada kulan ee horyaalka hal xilli ciyaareed ku garaacdo Manchester United markii ugu horreysay tan iyo fasalkii 1989-90.
Spurs ayaa Man United garaacday lix ka mid ah 28 kulan oo ay garoonkeeda kula ciyaartay, hase ahaatee, saddex ka mid guulahaas ayaa yimid shantii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay.
Guusha keliya ee Man United ay ka qaadatay Spurs iyadoo marti u ah siddeeddii jeer ee ugu dambeysay oo ay soo booqatay London waxay timid bishii January ee sanadkii 2019 ciyaar ka dhacday Wembley Stadium, afar ka mid ah siddeeddaas barbarro ayay galeen, saddexda kalena Red Devils waa la garaacay.
Tottenham Hotspur ayaa heysata shan guul oo xiriir ah kulammada garoonkeeda dhammaan tartammada haatan iyagoo dhalinayay ugu yaraan labo gool.
Hase ahaatee, Spurs ayaa guuldarreysatay lixdii kulan ee ugu dambeysay horyaalka oo ay wajahday kooxaha kum jira lix kaalin ee sare ee Premier League.
Jose Mourinho ayaa guuldarro la’aan ah kulammada horyaalka Ingiriiska ee uu garoonka kooxdiisa kusoo dhoweeyay Manchester United isagoo shan guul iyo shan barbarro ka heysto, waxaana haddii uu caawa guul ka gaaro kooxdiisii hore uu noqon doonaa macallinkii ugu horreeyay ee Man United intuu ka tagay laba kulan garaaca hal xilli ciyaareed gudihiis tan Dave Sexton oo isagoo Coventry hor kacaya Red Devils dhibcaha ka qaatay xilli ciyaareedkii 1981-82.
Harry Kane ayaa u baahan hal gool si uu u gaaro 20 gool oo Premier League ah hal xilli ciyaareed markiisii shanaad.
Kane ama Son Heung-min ayaa gool ama caawin ku leh 40 ka mid ah 51-ka gool ee ay Spurs ka dhalisay Premier League fasal ciyaareedkan.
Manchester United ayaa la kulantay kaliya hal guuldarro 24-kii kulan ee ugu dambeysay horyaalka, iyagoo heysta 15 guul iyo siddeed barbarro.
Man United ayaa dhexda kaga jirta rikoorkeeda guuldarro la’aaneed ee ugu dheerraa kulammada bannaanka horyaalka Premier League oo ah 22 kulan oo guuldarro la’aan ah, waxaana ay ku jirtaa guuldarro la’aantii saddexaad ee ugu dheerreeyd kulammada bannaanka horyaalka Ingiriiska ebid, waxaana labada rikoor ee ka wanaagsan iyada sameeyay Arsenal oo 23 kulan iyo 27 kulan oo guuldarro la’aan ah sameeyay kulammada bannaanka horyaalka.
Man United ayaa ah kooxda kaliya ee guuldarro la’aan ah kulammada bannaanka horyaalka guud ahaan shanta horyaal ee ugu waaweyn qaaradda Yurub.
Red Devils ayaa laga dhaliyay kaliya hal gool toddobadii kulan ee ay wajahday kooxaha ku jira lixda sare ee horyaalka tan iyo lixdii gool ee Spurs kaga dhalisay Old Trafford 4-tii October ee 2020.
Marcus Rashford ayaa noqday xiddigii ugu horreeyay ee Man United u dhaliya 20 gool ama wax ka badan dhammaan tartammada laba xilli ciyaareed oo is xiga tan iyo Wayne xilli ciyaareedyadii 2008-09 and 2009-10.